Axmed Macalin fiqi oo ku Guuleestay Xildhibaanimada Aqalka Hoose | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Axmed Macalin fiqi oo ku Guuleestay Xildhibaanimada Aqalka Hoose
Waxaa goor dhow ku guuleestay doorashada aqalka hoose Axmed macalin Fiqi oo kamid ahaa musharixiinta u tartamayay.
Axmed ayaa Guushaasi ka helay meel cidlo ah kadib markii maanta uusan goobta soo xaadirin Axmed Ducaale xaaf.
Wariye kusugan goobta shirka ayaa sheegaya in aan la garaneen sababta keentay in xaaf imaan waayo goobta doorashada.
Sidoo kale doorashada oo la filayay inay dhacdo arbacada ayaa maanta dhacday kadib khilaafaadka qaar oo la xaliyay.
Guddiga Doorashada maamulka Galmudug ayaa shaaciyay in Axmed Macalin Fiqi oo ahaa Xoghayaha Xisbiga Daljir ku guuleestay Doorashada Aqalka Hoose ee Baarlaaanka kadib markii uu ka adkaaday musharaxii la tartamayay.
Siyaasigan kamid noqday Aqalka Hoose ayaa kamid ah Siyaasiyiinta sida weyn mucaaradka ugu ah Dowlada Madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uuna Marar badan Warbahainta ka dhaliilay Fiqi Siyaasada Dowlada Soomaaliya.
Gudoomiyaha Xisiga Daljir Xasan Macalin Maxamuud ayaa sidoo kale horey ugu guuleestay in uu kamid noqdo Aqalka Hoose ee Baarlamaanka, waxaana xisbiga Daljir Baarlamaanka ku leeyihiin dhoor xubnood oo muhiim ah.